Sida loo keydiyo batteriga talooyinka Google | Androidsis
DaniPlay | | Batariga, Tababarada
Google Waqti ka dib waxaa lagu taliyay in la isticmaalo barnaamijyadeeda u gaarka ah kuwa horumariya, oo si fiican uga dhex shaqeeya deegaanka Android. Shirkadda Mountain View badanaa waxay ku talineysaa waxyaabo kale sidoo kale, iyaga ka mid ah keydinta batari iyadoo qaar ka mid ah tabaha.
Google wuxuu muujinayaa ilaa shan talo bixin oo ku saabsan keydinta bateriga, qaar badan oo ka mid ahi waxay u oggolaan doonaan processor-ka iyo RAM in ay xoogaa nastaan ​​marka taleefanka aan la isticmaalin. Raac talo kasta oo ku taal warqadda haddii aad rabto in qalabkaagu uu yeesho madax-bannaanida ku dhowaad hal maalin oo la isticmaalo.
1 Iska yaree dhalaalka oo deji dhalaalka otomaatiga ah
2 Ka saar barnaamijyada asalka ah
3 Shaashaddaadu dami
4 Daar wanaajinta baytariga
Iska yaree dhalaalka oo deji dhalaalka otomaatiga ah
Talada koowaad ee Google waa in la yareeyo nuurka, tan waa inaan u tagnaa Settings> Heerka Nuurka, halkan hagaajinta adiga ayaa iska leh. Wax yar ka hooseeya waxaan haysannaa ikhtiyaarka «Toosinta otomaatiga ah», qaybta waxay ku leedahay «Ku hagaaji heerka iftiinka sida ku cad iftiinka la heli karo», calaamadee ikhtiyaarkan.
Iftiinka taleefanka ayaa si weyn u faragelinaya nolosha batteriga ee taleefanka casriga ah, sidaa darteed waxaa lagu taliyay in la isticmaalo qiyaastii 45-50% si loo badbaadiyo batteri ku filan maalintii oo dhan. Terminal-yada leh batari ka sareeya 4.000 mAh badanaa waxay keydiyaan lacag badan haddii aad howshaas wado.
Ka saar barnaamijyada asalka ah
Haddii mobilkaagu ku shaqeeyo barnaamijyada xagga dambe, wuu sii wadi doonaa inuu ku shaqeeyo barnaamijka xitaa adigoon isticmaaleyn aaladdaada waqtigaas. Si loo xaddido taas tag Settings> Codsiyada> Araajida iyo ogeysiisyada qeybtana ka eeg barnaamijyadi dhawaan la furay, iyo sidoo kale dhammaan codsiyada ay cunayaan.
Waxaa laga yaabaa inay tahay mid ka mid ah qaybaha ugu xiisaha badan, waxay kuxirantahay codsiyada aad isticmaasho badan waxaad ku qasbi doontaa joojinta barnaamijyadan in aadan rabin inaad isticmaasho xilligan. Haddii aad joojiso kuwa aadan helin inaad adeegsato, waad keydin kartaa wax ka badan inta aad u maleyneyso, qodobkani waa mid aad u jilicsan, laakiin xiiso leh inuu badbaadiyo culeyska.
Dhamaan taleefannada Android waxay u baahan yihiin shaashadda si loo demiyo si aysan u cunin ilaha, taleefan kasta wuxuu ikhtiyaar u leeyahay inuu shaashadda u damiyo si otomaatig ah hadaadan qalabka isticmaalin. Si aan halkaas u tagno waxaan aadeynaa Settings> Shaashad> Hakinta (tani way ku kala duwanaan kartaa iyadoo ku xiran taleefanka) oo waxaan doorannaa ikhtiyaarka ilbiriqsiyo ka yar, xaaladdan waxaan dooranaynaa 15 ilbiriqsi.
Ikhtiyaarka ah in laydhka la joojiyo ayaa ka dhigaysa terminal-ka inuu cuno ilaha yar ka dib dhibcihii hore ka dib way fiicantahay inaad raacday mid kasta oo ka mid ah xulashooyinka warqadda si aad u keydiso tamarta.
Daar wanaajinta baytariga
Laga soo bilaabo noocyada kala duwan ee Android wixii ka dambeeyay waxaa jira ikhtiyaar lagu hagaajinayo batteriga, waa lagama maarmaan haddii aad rabto inaad iska ilaaliso inaad taleefanka ku shubto dhowrkii saacadoodba. Si aad u gaarto xulashadan u tag Settings> Batariga isla markaana gudaha gudaha ka hel "Badbaadinta batteriga", dhaqaajiso ikhtiyaarka maamul batteri wanaagsan.
Markaad dhaqaajiso, iska ilow maareynta cabirrada qaar, maadaama ay dejineyso heerka dhalaalka tooska ah iyo xulashooyinka kale ee isla taleefanku u arko mid caqli badan si aad u badbaadin karto boqolley yar maalintii oo dhan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Tababarada » Sida loo keydiyo batteriga talooyinka Google
Motorola's Moto RAZR 5G taleefanka casriga ee isku laaban wuxuu horey u haystay taariikh sii deyn ah